जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर सक्कली कि नक्कली: बीमा समिति बेखबर ? - Aathikbazarnews.com जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर सक्कली कि नक्कली: बीमा समिति बेखबर ? -
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर सक्कली कि नक्कली: बीमा समिति बेखबर ?
नेपालका १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले आ–आफ्ना कम्पनीहरुको बीमीतलाई दिने बोनसदर सार्वजनिक गरेका छन् । बोनसदरमा उच्च प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । बोनसदरले व्यवसाय विस्तारमा हुने भएकााले १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका यी तथ्याङ्क नक्कली हुन की सम्कली बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालज्यू ? यो खोजीको विषय बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । पूराना बीमा कम्पनीहरुलाई चुनौती दिँदै नयाँ बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका बोनसदर के को आधारमा आएका हुन् । किन बिमित झुक्याउन नक्कली बोनसदर सार्वजनिक गरिन्छ । यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छनैं ।
वर्षेदेखि साधारण सभा गर्न नसक्ने, कम्पनीको अडिट रिर्पोट तयार गर्न समेत नसक्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढि बोनसदर सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ तर नियमनकारी निकाय बीमा समिति बोल्दैन कारण के हो ? पूराना र ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरु नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कमपनीहरुलाई चुनौती दिँदै नयाँ जीवन बीमा कम्पनी ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु लाइृफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले चुनौती दिँदै बोनसदर सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ । यी बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर सक्कली हुन की नक्कली अब खोजीको विषय बनेको छ बीमा समितिका अध्यक्षज्यू हेक्का होस् तत्कालै छानवीन होस् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको स्थापना भएसँगै कम्पनीहरुबीच बीमितलाई दिने बोनस दरमा प्रतिष्पर्धा मात्रै बढेको छैन । कसले कति बोनसदर दिने भन्ने देखासीखी पनि बढेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमा समितिका अध्यक्षज्यू । १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १५ कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बीमितलाई दिने नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
कम्पनीहरुले सञ्चालनमा ल्याएका मुनाफामा आधारित (बोनस आर्जन गर्ने) गरी जारी भएका बीमालेखका लागि बोनस दर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक बोनसदर घोषणा गर्ने कम्पनीमा हुन् भन्दा फरक पर्दैन । आव २०७६÷७७ का लागि बीमितलाई बोनस दर घोषणा गरेका १५ कम्पनीमध्ये उच्च बोनस दर नेशनल लाइफ इन्स्योरेनस कम्पनी रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सानिमा लाइफ, आइएमई लाइफ, प्राइम लाइफ, नेशनल लाइफ, मेट लाइफ, प्राइम लाइफ, ज्योति लाइफ, एशियन लाइफ, सूर्या लाइफ, सिटिजन लाइफ, प्रभु लाइफ, एलआईसी नेपाल, रिलायन्स लाइफ, सन नेपाल लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ । कम्पनीहरुले सञ्चालनमा ल्याएका मुनाफामा आधारित (बोनस आर्जन गर्ने) गरी जारी भएका बीमालेखका लागि बोनस दर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक बोनसदर घोषणा गर्ने कम्पनीमा हुन् भन्दा फरक पर्दैन । आव २०७६÷७७ का लागि बीमितलाई बोनस दर घोषणा गरेका १५ कम्पनीमध्ये उच्च बोनस दर नेशनल लाइफ इन्स्योरेनस कम्पनी रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेशनल लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिहजार न्यूनतम ६३ रुपैयाँदेखि ८८ रुपैयाँसम्म बोनस दर कायमा गरेको भेटिएको छ ।
नेशनल लाईफ इन्स्यारेन्स पछि नेपाल लाइफले उक्त आवका लागि बीमितलाई प्रतिहजार न्यूनतम ५६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८३ रुपैयाँसम्म बोनस दर तोकेको देखिन्छ । मेट लाइफले बीमितलाई प्रतिहजार न्यूनतम ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म बोनस दर दिने घोषणा गरेको देखिन्छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले पूराना कम्पनीलाई टक्कर दिएका छन् । केही पूराना बीमा कम्पनीको तुलनामा नयाँ कम्पनीले दिने बोनस दर धेरै छ भन्दा अब फरक पर्दैन । यो कसरी सम्भव छ बीमा समितिका अध्यक्षज्यू होस् छानवीन होस् । एशियन लाइफले प्रति हजार न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँ, प्राइम लाइफले न्यूनतम ३२ रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँसम्म बोनस दर देखाएको छ । सूर्या लाइफले प्रति हजार न्यूनतम ३८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दर कायम गरेको छ । यी कम्पनीको बोनस दरलाई नयाँ बीमा कम्पनीले पछि पारेका छन् ।
प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रति हजार न्यूनतम ३३ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँ, सन नेपालले न्यूनतम १८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँ, महालक्ष्मी लाइफले न्यूनतम ४० रुपैयाँदेखि ५२ रुपैयाँसम्म र रिलायन्स लाइफले न्यूनतम १९ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँ बोनस दर कायम गरेको भेटिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको बोनस दर तालिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा सात कम्पनीको बोनस दर घटेको पनि भेटिएको छ ।
ज्योति लाइफले बीमितलाई प्रतिहजार न्यूनतम ४३ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँ बोनस दर कायम गरेको देखिन्छ । सिटिजन लाइफले प्रतिहजार न्यूनतम २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७३ रुपैयाँ बोनस दर कायम गरेको देखिन्छ । आइएमई लाइफ र सानिमा लाइफले प्रति हजार न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर कायम गरेको भेटिएको छ । प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रति हजार न्यूनतम ३३ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँ, सन नेपालले न्यूनतम १८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँ, महालक्ष्मी लाइफले न्यूनतम ४० रुपैयाँदेखि ५२ रुपैयाँसम्म र रिलायन्स लाइफले न्यूनतम १९ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँ बोनस दर कायम गरेको भेटिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको बोनस दर तालिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा सात कम्पनीको बोनस दर घटेको पनि भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्पनीहरुको बोनस दर बीमा समितिको फ्युचर बोनसको व्यवस्थाले प्रभावित पर्न गएको हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने बोनस दरमा एकरुपता कायम गर्नका लागि भन्दै फ्युचर बोनसको अवधारणा अघि सारेको छ । जसको प्रभाव बीमा कम्पनीले बीमितलाई दिने बोनस दरमा पर्न गएको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
साच्चै भन्ने हो भने ‘ल्याप्स रेसियो बढ्दा बोनस दर घट्छ । सरेण्डर दर बढ्दा पनि बोनस दर प्रभावित हुन्छ । मृत्युदर बढ्दापनि घट्छ,’ उनले भने,‘ क्लेमहरु बढ्यो भने पनि घट्छ । ब्याजदर घट्यो भने पनि प्रभावित हुन्छ ।’ तर पनि नयाँ कम्पनीहरु डरलाग्दो बोनस दर देखाएको देखिन्छ । मृत्युदर बढ्नु, सरेण्डर बढ्नुु लगायतका कारणले पनि बोनस दर प्रभावित हुने पक्का पक्की छ ।
5 वटा बीमा कम्पनीको बोनस दर बढ्दा चार कम्पनीको बोनस दर स्थिर छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्राइम लाइफ, प्रभु लाइफ, आइएमई लाइफ र सानिमा लाइफले बोनस दर बढाएका छन् । सिटिजन्स लाइफ, ज्योति लाइफ, नेशनल लाइफ र सूर्या लाइफको बोनस दर भने स्थिर रहेको देखिन्छ । बोनसदर सक्कली कि नक्कली खोजीको विषय बनेको छ ।
एशियन लाइफ, रिलायन्स लाइफ, एलआइसी नेपाल, महालक्ष्मी लाइफ, नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ र मेट लाइफको बोनस दर घटेको हो ।5वटा बीमा कम्पनीको बोनस दर बढ्दा चार कम्पनीको बोनस दर स्थिर छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्राइम लाइफ, प्रभु लाइफ, आइएमई लाइफ र सानिमा लाइफले बोनस दर बढाएका छन् । सिटिजन्स लाइफ, ज्योति लाइफ, नेशनल लाइफ र सूर्या लाइफको बोनस दर भने स्थिर रहेको देखिन्छ । बोनसदर सक्कली कि नक्कली खोजीको विषय बनेको छ । बीमा समितिका अध्यक्षज्यू हेक्का होस् । सचेत भया ।
चार बैंकले ल्याए नौ अर्ब रुपैयाँ विदेशी संस्थाबाट ऋण
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विद्यालयलाई साइन्स ल्यावका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु प्रदान
सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका तत्कालीन डिपुटी सीइओ भट्टराईका यस्ता छन्ः दर्जनौ घोटला काण्ड
सन्तोष कोइराला कामु सिइओ